Bangiga dhexe ee Somaliland oo sheegay inuu sare u qaaday sarrifka shilinka Somaliland - BBC News Somali
Bangiga dhexe ee Somaliland oo sheegay inuu sare u qaaday sarrifka shilinka Somaliland
Guddoomiyaha baanka dhexe ee Somaliland Cali Ibrahim Baqdaadi
Gudoomiyaha Baanka dhexe ee Jamuhiriyada iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa sheegay in talaabooyin ay qaadeen dhawrkii bilood ee u danbaysay, ay keeneen in sarifka doolarku hoos u dhaco in ku dhow 25%, halka intaa in le'egna sare u kac uu sameeyay shilinka Somaliland marka doolarka lagu sarifayo.
Guddoomiyaha baanka dhexe ee Somaliland Cali Ibrahim Baqdaadi oo wareysi gaar ah siiyey BBC-da ayaa sheegay iney badan yihiin tallaabbooyinka ay qaadeen tillaabooyinkaasi oo ay ka mid yihiin "waxaan yareynay lacagti suuqa geli jirtay bangiga iyo xukamaddaba waxaana suuqa ku yaraaday shilinka somaliland qiimahiisuna uu kordhay, xukumadduna waxay xaddiidday kharashaadkeeda aan miisaniyadda ku dhisneen oo sababayey iney lacag badan suuqa soo gasho."
"1-kii doolar seddex ilaa afar bilood ka hor waxaa lagu sarrifi jiray 10,000 oo somaliland ah, hadda laakiin markaan tillaabbooyin dhawr ah qaadnay kaddib waxaa 1-ki doolar lagu sarrifaa 8,200-8,300"
Somaliland oo ku dhawaaqday taariko cusub
Dabeyshii isbaddelka Geeska Afrika miyaa gaartay Somaliland?
"balse waxaa jira meherad badan oo weli doolarka ku dhufanaya qiimihi hore ee ee 10,000 sida huteellada, maqaayadaha, meelaha lagu iiibiyo alaabta tafaariiqda ah, dowladduna waxay billaawday iney la xisaabtanto meheradhaasi qaarkoodna waxay ku soo celiyeen sarrifka 9,000" ayuu yiri guddoomiyaha.
"Ganacsatada yaryar ee Somaliland waxaan uga digeynaa ayuu yiri iney u hoggaansamaan sharciga oo ay hoos u dhigaan sarrifka lacagaha oo ay gaarsiiyaan ilaa iyo 8,500 had iyo jeerna ay la socdaan qiimaha sarrifka ee hadba isbeddelayo."
"Haddana inuu si buuxda uu shilinka Somaliland u sal dhigo waxay qaadaneysaa wakhti" ayuu yiri guddoomiyaha bangiga dhexe.
Xigashada Sawirka, Bangiga dhexe Somaliland
Dadka dhibka ugu badan kala kulmaya sarrifka doolarka ee isbedbeddalo waxaa ka mid ah dadka biilkooda doolar ahaan looga soo diro iyo ganacsatada dakhligooda uu doolarka ayahay.
Guddoomiyaha maruu ka hadlay siyaasadda Baanga wuxuu yidhi "waa inuusan marnaba sarrika 1-ki doolar uusan ka hoos marin 8,000, 9,000 oo shilinna uu ka sara marin oo inta u dhaxeeyo 8,000 haddii ay ka hoos marto iyo 9,000 haddii ay ka sara martaba uu bangigu soo faragelinayo."
Mar guddoomiyaha wax laga weyddiiyey lacagaha yaryar ee Shilin Soomaaliga ee suuqa laga la'yahay oo suuqa un ay ku soo hareen 500, iyo 1,000 shilin, waxaa uu yiri arrintaasi wey jirtaa waxaana uga wacan lacagta lagu daabacayey 50 iyo 100 iyo lacagaha yaryar oo sare u kacay balse bangiga uu hayo keyd lacageed oo 500 u badan toddobaad kadibna insha allah bangiga uu fasixi doono".